Unikezelo lokuqala lweMoto P30 zilapha I-Androidsis
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kutyhilwe ukuba i-Motorola izakuveza uluhlu lwayo lweefowuni ngo-Agasti 15. Zizonke iimodeli ezintathu, ezenza uluhlu lweMoto P30. Awuzange uve ngezi fowuni ngaphambili, ngenxa yoko kukho ulonwabo kunye nomdla ojikeleze bona. Ngenye imini emva kokunikezelwa kwayo, sele sikufumene ukuhanjiswa kweemodeli zokuqala zenkampani.
Imalunga neMoto P30, esele sinayo le nto. Enkosi kubo sifumana umbono ocacileyo wento esinokuyilindela kule modeli kuyilo. Kwaye kubonakala ngathi iMotorola nayo iwile ngenxa yamakhubalo enotshi.
Kuba le fowuni inotshi kwiscreen sayo, etsala umdla omkhulu. Kwezi nyanga, imeko ibikukusebenzisa inotshi encinci, kodwa iMotorola iya kwelinye icala. Kuba inkampani izibophelele kwinotshi enkulu, elawula isikrini.
Ngokuqinisekileyo baninzi abathengi abangayi konwaba ngokupheleleyo kuyilo lwale Moto P30. Kulindeleke ukuba kubekho iinzwa ezimbini ngaphambili, nasemva kwefowuni sifumana ikhamera kabini, Icwangciswe ngokuthe nkqo kunye nesenzwa somnwe weminwe.
Ukuphumla, akukho zinto zininzi kakhulu zothusayo okanye ezinye izinto ezinokuhlomla kuzo. Yinotshi ethi ivelise eyona nto inomdla kuyo kule Moto P30. Uyabona okanye u-intuit ukuba isixhobo siya kuba nescreen esikhulu, ngokwamarhe amva nje ibingaba zii-intshi eziyi-6,2. Kwaye iikhamera zangasemva ziya kuba li-16 + 5 MP.
Eyona nto inokwenzeka, iMoto P30 iya kuba ne-Android Oreo njengenkqubo yokusebenza kwayo. Kodwa singasombulula amathandabuzo ngomso, umhla olu luhlu lweefowuni lwenziwe. Siyakukhumbuza ukuba ukongeza kule modeli, inqaku le-P30 kunye neP30 Play ziya kufika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » Ukucoca unikezelo lokuqala lweMoto P30